သူမနဲ့မှေးနလေ့ေးမှာ ခငျပှနျးလောငျးနဲ့အတူ Prewedding Photo လေးတှရေိုကျကူးခဲ့တဲ့ အဆိုတျောဗီဗာဟိနျး – Shwe Yaung Media
သူမနဲ့မှေးနလေ့ေးမှာ ခငျပှနျးလောငျးနဲ့အတူ Prewedding Photo လေးတှရေိုကျကူးခဲ့တဲ့ အဆိုတျောဗီဗာဟိနျး
ပရိသတျကွီးတို့ရေ အဆိုတျောဗိုဟိနျးကတော့ အနုပညာသကျတမျးတဈလြှောကျမှာမွူးမွူးကွှကွှသီခငျြးတှကေိုသီဆိုရငျး အောငျမွငျကြျောကွားတဲ့ သီခငျြးမြားစှာနဲ့အတူ ပရိသတျတှရေဲ့အားပေးမှုကို ရရှိထားသူဖွဈပါတယျ။
ဗီဗာဟိနျးကတော့ အနုပညာရှငျတှဖွေဈကွတဲ့ အဆိုတျော ဗိုလျဟိနျးနဲ့ အဆိုတျောဗိုလျမဆိုတဲ့တေးသံရှငျတှရေဲ့ မြိုးဆကျသဈအဆိုတျောတဈဦးပဲဖွဈပွီး rap အဆိုတျောရှိုငျးလငျးအောငျရဲ့ညီမလေးလညျးဖွဈပါတယျနျော။
မွနျမာနိုငျငံအနှံ့အပွားလကျရှိဖွဈပျေါနတေဲ့ ကိုဗဈရောဂါကပျဆိုးကွီးနဲ့ပတျသတျပွီးအောကျဆီဂငျြ လုံလောကျမှုကွောငျ့ အသကျပေါငျး မြားစှဆုံးရှုံးနရေ ပါတယျ။
ကိုဗဈကွောငျ့အသကျဆုံးရှူံးရတဲ့ သူတှထေဲမှာအဆိုတျော ဗီဗာဟိနျးရဲ့မိဘနှဈပါးနဲ့အဈကိုဖွဈသူတို့ အပါအဝငျပဲဖွဈပါတယျနျော။ဖခငျဖွဈသူကွီးကှယျလှနျသှားပွီရကျပိုငျးအကွာမှာ မိခငျကိုထပျမံဆုံးရှုံ့းရတာဖွဈပွီး နောကျထပျမကွာခငျရကျပိုငျးမှာ ထပျမံပွီး အဈကိုဖွဈသူကှယျလှနျ သှားတာပဲဖွဈပါတယျနျော။
မိသားစု လေးယောကျမှာသုံးယောကျကတဈပတျအတှငျး ရှဆေ့ငျ့နောကျဆငျ့ ထှကျခှါသှားခဲ့တဲ့ ဗီဗာဟိနျးရဲ့အဖွဈကတော့ တကယျကိုဆိုးလှနျးပါတယျနျော။
ဗီဗိာဟိနျးကတော့ မိသားစုတှဆေုံးရှံးပွီးနောကျပိုငျးမှာတော့ ကိုယျတိုငျရပျတညျဖို့အတှကျ အှနျလိုငျးမှာလညျး ဈေးရောငျးရငျးရပျတညျမယျဆိုပွီးအားပေးကွဖို့လညျး ပွောထားပါသေးတယျနျော. ဒီနမှေ့ာတော့ ဗီဗာဟိနျးတဈယောကျ ခဈြသူနဲ့ရှလေကျတှဲတော့မှာဖွဈလို့ Aroma Studio မှာ Prewedding ရိုကျကူးခဲ့တဲ့ပုံလေးတှကေို တငျပေးလာတာ ဖွဈပါတယျနျော…
ပရိသတျကွီးလညျး ဗီဗာဟိနျးတို့ခဈြသူအတှကျ ဆုတောငျးပေးခဲ့ကွပါအုံးနျော..
သူမနဲ့မွေးနေ့လေးမှာ ခင်ပွန်းလောင်းနဲ့အတူ Prewedding Photo လေးတွေရိုက်ကူးခဲ့တဲ့ အဆိုတော်ဗီဗာဟိန်း
ပရိသတ်ကြီးတို့ရေ အဆိုတော်ဗိုဟိန်းကတော့ အနုပညာသက်တမ်းတစ်လျှောက်မှာမြူးမြူးကြွကြွသီချင်းတွေကိုသီဆိုရင်း အောင်မြင်ကျော်ကြားတဲ့ သီချင်းများစွာနဲ့အတူ ပရိသတ်တွေရဲ့အားပေးမှုကို ရရှိထားသူဖြစ်ပါတယ်။
ဗီဗာဟိန်းကတော့ အနုပညာရှင်တွေဖြစ်ကြတဲ့ အဆိုတော် ဗိုလ်ဟိန်းနဲ့ အဆိုတော်ဗိုလ်မဆိုတဲ့တေးသံရှင်တွေရဲ့ မျိုးဆက်သစ်အဆိုတော်တစ်ဦးပဲဖြစ်ပြီး rap အဆိုတော်ရှိုင်းလင်းအောင်ရဲ့ညီမလေးလည်းဖြစ်ပါတယ်နော်။
မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့အပြားလက်ရှိဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ ကိုဗစ်ရောဂါကပ်ဆိုးကြီးနဲ့ ပတ်သတ်ပြီးအောက်ဆီဂျင် လုံလောက်မှုကြောင့် အသက်ပေါင်း များစွဆုံးရှုံးနေရ ပါတယ်။
ကိုဗစ်ကြောင့်အသက်ဆုံးရှူံးရတဲ့ သူတွေထဲမှာအဆိုတော် ဗီဗာဟိန်းရဲ့မိဘနှစ်ပါးနဲ့အစ်ကိုဖြစ်သူတို့ အပါအဝင်ပဲဖြစ်ပါတယ်နော်။ဖခင်ဖြစ်သူကြီးကွယ်လွန်သွားပြီရက်ပိုင်းအကြာမှာ မိခင်ကိုထပ်မံဆုံးရှုံ့းရတာဖြစ်ပြီး နောက်ထပ်မကြာခင်ရက်ပိုင်းမှာ ထပ်မံပြီး အစ်ကိုဖြစ်သူကွယ်လွန် သွားတာပဲဖြစ်ပါတယ်နော်။
မိသားစု လေးယောက်မှာသုံးယောက်ကတစ်ပတ်အတွင်း ရှေ့ဆင့်နောက်ဆင့် ထွက်ခွါသွားခဲ့တဲ့ ဗီဗာဟိန်းရဲ့အဖြစ်ကတော့ တကယ်ကိုဆိုးလွန်းပါတယ်နော်။
ဗီဗိာဟိန်းကတော့ မိသားစုတွေဆုံးရှံးပြီးနောက်ပိုင်းမှာတော့ ကိုယ်တိုင်ရပ်တည်ဖို့အတွက် အွန်လိုင်းမှာလည်း ဈေးရောင်းရင်းရပ်တည်မယ်ဆိုပြီးအားပေးကြဖို့လည်း ပြောထားပါသေးတယ်နော်. ဒီနေ့မှာတော့ ဗီဗာဟိန်းတစ်ယောက် ချစ်သူနဲ့ရွေလက်တွဲတော့မှာဖြစ်လို့ Aroma Studio မှာ Prewedding ရိုက်ကူးခဲ့တဲ့ပုံလေးတွေကို တင်ပေးလာတာ ဖြစ်ပါတယ်နော်… ပရိသတ်ကြီးလည်း ဗီဗာဟိန်းတို့ချစ်သူအတွက် ဆုတောင်းပေးခဲ့ကြပါအုံးနော်..